Uthotho lweHuawei Mate 20 lufumana i-beta ye-EMUI 9.1 ngophuculo oluninzi | I-Androidsis
Uthotho lweHuawei Mate 20 lufumana i-EMUI 9.1 beta ngophuculo oluninzi
La Inguqulelo yamva nje ye-beta ye-EMUI 9.1 Iyafumaneka ngoku kuwo onke amanqanaba aphezulu e-Huawei Mate 20 (Umlingani 20, Umlingani 20 Pro, Umlingane 20X y Mate 20 RS Idrafti yoyilo). Emva kokubonelela ngamava azinzileyo kolu sapho lweeflegi, i-EMUI 9.1 iya kukhutshelwa kwezinye iimodeli zeHuawei kungekudala.
Uhlaziyo olutsha ifumaneka kuphela kwizixhobo ezingazinzanga ezisebenzisa i-EMUI 9.0.1. Sicebisa ukuba uqhubeke nohlaziyo kuphela xa usazi konke malunga nokufakwa kwe-beta. Ngapha koko, inkampani ityhile ukuba uhlaziyo aluxhasi inqaku lokubuyela umva; nje ukuba uhlaziyekile, akusayi kubakho ndlela yokubuyela kuhlobo lwangaphambili.
Zininzi izinto ezintsha kunye nophuculo kwi-EMUI 9.1. I-interface entsha yomsebenzisi eneempawu ezintle zebhodi yenza ukuba ibonakale, ilula kwaye ichaze. Ngoku, yonke inkqubo icokisiwe kwaye yenziwa ngcono, enkosi kwiHuawei entsha yeCompiler, ephucula ukusebenza ngama-24%, ukuphendula ngama-44%, kunye nemisebenzi yomntu wesithathu ngama-60%. Injongo yayo kukuzisa ubungakanani obunzulu kwinqanaba leengcambu.
Uthotho lweHuawei Mate 20 lufumana i-EMUI 9.1 Huawei Mate 20 uthotho lufumana i-EMUI 9.1
El Inkqubo yefayile entsha ye-EROFS yonyusa isantya sokufunda ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20, ngaphezulu kwenkqubo yefayile ye-EXT4 yangaphambili. Ukongeza, i-GPU Turbo 3.0 entsha ikhawulezisa ukuqhubekeka kwemizobo, iqinisekisa ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi ngamaqondo aphezulu esakhelo.
Ukuhanjiswa kwe-Mate 20 kuthotho kudlula kwiiyunithi ezili-10 lezigidi
Okwangoku, uhlaziyo lusasazwa eTshayina, nangona kungekudala luza kwanda liye kwamanye amazwe. Ukuyifaka ngempumelelo, Qinisekisa ukuba isixhobo sinendawo yasimahla ye-6GB kugcino lwangaphakathi kwaye siqhuba kwi-EMUI 9.0.1. Kwangelo xesha, sicebisa ukuba kwenziwe inkqubo yokukhuphela xa uqhagamshele kwinethiwekhi ye-Wi-Fi ezinzileyo, ukunqanda ukuphazamiseka xa ukhuphela iphakheji kwaye, endaweni yoko, ungasebenzisi idatha yeselfowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Uthotho lweHuawei Mate 20 lufumana i-EMUI 9.1 beta ngophuculo oluninzi
Ukuqinisekiswa ngokusesikweni: iLenovo Z6 Pro iya kuba ngumnxeba we5G
I-OCO yiphazili engaqhelekanga yeengqondo ezi-agile kunye nomculo omninzi we-elektro